FXCC BAARLAMAANKA IYO FOOMKA DIB U EEGIDDA SHARCIYADA & SHURUUDAHA | FXCC
Home / FXCC BAARLAMAANKA IYO FOOMKA DIBADA EE LOOGU TALAGALAY & SHARCIYADA
FXCC BAARLAMAANKA IYO FOOMKA DIBADA EE LOOGU TALAGALAY & SHARCIYADA
Kaafi shuruudaha iyo shuruudaha
Wakhtiga Ballan-qaadka: Dhiirigelintani waxay dhacaysaa 30th of December 2017.
Macaamiisha la aqbali karo:
Macaamiisha cusub ee jira iyo kuwa FXCC. (Kuwa haysta xisaabta caadiga ama XL)
Fursadaha lagu doorto si ay uga qaybqaataan bixinta iyagoo si cad u caddaynaya go'aankiisa ama xaakimka Hubka Ganacsiga, qaybta gunnada.
Macaamiisha aan ka qaybqaadanayn wax horumarin ah oo leh FXCC.
marsiin ah: Faa'iidada ugu badan ee Xisaabaadka kaqeybqaadanaya dhiirigelintan waa 1: 200
Keydka Aqoonsiga: Hawlgab lacageed oo ku daraya miisaan cusub oo loogu talagalay koontada loo yaqaan 'Client Client's' ee xisaabtanka ganacsiga iyada oo loo marayo lacag bixin ay bixiso FXCC. Isbedelka gudaha, dib-u-dheelitirka dheelitirka, ka-noqoshada dheelitirka la heli karo iyo dib-u-dirid mar labaad, Soo-dejiyeyaasha / Shirkadaha iska-xayeysiiya / lacag-bixinta ama wakiillada looma tixgelin doono lacag cusub .
100% Buuxinta bilowga: Waayo, ugu horeysay Maqnaanshaha Takhasuska leh ee ay sameeyeen Macaamiisha Caqli-gal ah ee xisaabaadka ay la leeyihiin FXCC inta lagu jiro muddada dallacaadda Macaamiisha Xaq u leh waxay heli doonaan 100% Bilowga Abaalmarinta Xilliga afar iyo labaatan (24) saacadaha shaqada kaddib marka la helo lacagtii hore. (Deebaajiga ugu horreeya ee ugu hooseeya wuxuu ku xiran yahay nooca xisaabta)
50% Lacagta Maalgelinta: Waayo, dambe / dheeraad ah Kaydka Takhasuska leh ee ugu yar $ $ 100 US kaas oo ay sameeyeen macaamiisha la aqbali karo xisaabaadka ay la leeyihiin FXCC muddada macallinimada Xaqiijinta Macmiilka Xaq u leh wuxuu heli doonaa 50% Maalgelinta Lacagta ah illaa afar iyo labaatan (24) .
Lacagta Lacagta Lacagta ah waxaa loo isticmaali karaa sida deyn ganacsi oo laga heli karo koontada ganacsiga Maalmaha kalandarka 50 laga bilaabo taariikhda helitaanka gunnada ("muddada u-qalmitaanka"). Taariikhdaas ka dib, wixii Lacagta Lacagta ah ee soo hartay waxaa laga saari doonaa xisaabta.
Qadarka ugu Muhiimsan ee Lacagta oo dhan: The badnaan qadarka lacagaha oo idil (oo ay ku jiraan bilowga bilawga iyo / ama Deeqaha Maalgalinta) ay ku qoreen FXCC qof kasta oo uqalma Caymiyaha gaarka ah waqti kasta ma dhaafi karno wadar ahaan $ 10,000 US (ama u dhigma).
Client 'A' 1st deposit $ 1,000 ▶ Macaamiisha 'A' ayaa lagu siin doonaa credit $ 1,000 (ie, 100%) oo bilaash ah bilowga;
Lacagtaasi waxay ka tarjumaysaa koontada macmiilka sida soo socota:
Balance Equity Lacagta (Lacagta la heli karo) Available (Free) Margin
Kadib, macmiilka 'A' wuxuu sameeyay 2nd deposit $ 3,000 ▶ Macaamiisha 'A' ayaa lagu siin doonaa deyn ah $ 1,500 (ie, 50%) sida deeqda
Client 'B' 1st deposit $ 15,000 ▶ Macaamiisha 'B' waxaa lagu siin doonaa credit $ 10,000 oo ah bilowga bilowga.
Kadib, macmiilka 'B' wuxuu sameeyay 2nd deposit $ 5,000 ▶ Macaamiisha 'B' ayaa bixin doona ma waxay helayaan gunno dheeraad ah.
Maxkada Lacagta Lacagta Lacagta ah ma dhaafi karto $ 10,000
FXCC waxay xaq u leedahay inay hoos u dhigto wixii codsi ah ee "Bonus" oo ku salaysan kaligeed, iyada oo aan loo baahnayn inay bixiso wax caddeyn ah ama sharaxaadda sababaha hoos u dhaca.
Lacagta waxaa lagu dari doonaa xisaabta macaamilka ee macaamilka ee macaamilka ah sida credit, Lacagta waxaa loogu talagalay ujeedooyinka ganacsiga kaliya iyo laguma guulaysan karo. Dakhli kasta oo lagu sameeyo maalgelinta abaal-marinta la-xisaabiyay waxaa laga yaabaa in laga soo qaado xisaabta iyada oo aan dib-u-dhac lahayn.
Ka bixida lacagaha laga bilaabo xisaabta macaamiil macquul ah ayaa loo oggol yahay qayb ahaan ama gebi ahaanba, taasina waxay keenaysaa in lacagta la bixiyay Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lagu Saarayo.
Macmiilka 'C' wuxuu leeyahay dheelitirka soo socda ee koontadiisa:
Client 'C' ayaa dalbaday $ 2,000 ka-noqoshada ▶ Lacagta abaal-marinta waxaa lagu dhimi doonaa $ 2,000.
Tani waxay ka tarjumaysaa xisaabta macmiilka sida soo socota:
Macmiilka 'C' ayaa codsaday in uu ka tago qadarka buuxa ($ 7,000) ▶ Lacagta la siiyay ayaa gebi ahaanba laga saari doonaa.
Kobcin lacag: Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta Lagu siinayo ayaa qayb ahaan loo dejin doonaa loona beddeli doonaa Balansiga isla markiiba kadib marka la xiro ganacsi kasta iyada oo aan loo eegin cadadka cutubka ku xiga.
Hirgelinta wareega wareega wareega 1 waa inay ku wareejiso qadar $ 1.0 (ama u dhiganta) laga bilaabo Lacagta Lacagta Lacagta (Debus Credit) si loo kala baxo.
Macmiilka 'D' wuxuu leeyahay dheelitirka soo socda ee laga heli karo xisaabtiisa ganacsi:
Macmiilka 'D' wuxuu iibiyey macaamil buuxa oo ah 1 badan oo ah EURUSD (sida furan oo la xiray amarka), oo faa'iido leh $ 100 ▶ Tani waxay ku dartey laba jeer oo soo socda oo ku soo galay taariikhda xisaabta:
Lacag bixinta - $ 1.0 (ie lacagta caddaanka ah ee laga jaro Credit)
Kaydka Lacagta ah $ 1.0 (ie lacagta caddaanka ah waxaa loo beddelaa lacag dhab ah oo lagu daray dheelitirka xisaabta).
Oo waxaa laga soo xigtay xisaabtarka xisaabtan sida soo socota:
Inta lagu jiro mudada u-qalmitaanka haddii macaamilka loo-yaqaan 'Client's Credential' (oo ay ku jiraan faa'iidada iyo khasaaraha) ay gaarto heer siman ama ka hooseeya 30% of credit ee la heli karo (si kale loo dhigo: xisaabtamuhu xisaabtamuhu wuxuu gaarayaa heer siman ama ka hooseeya 130% ee deynta la heli karo), lacagta ah ee Lacagta Lacagta ah ee la heli doonaa si toos ah loo saaro (credit), waxaa lagu kaydiyaa "Account Saver" oo gaar ah, waxaana loo isticmaali doonaa in lagu abaalmariyo Macmiilka U Magacaaban ee Lagu Magacaabay Ganacsi kale oo dheeri ah oo lagu xisaabtamayo miisaankii hartay ee Xogta 10 illaa dhammaadka xilliga u-qalmitaanka.
- 30% ee Lacagta la heli karo (credit) = $ 300
Qiimeeyaha 'D' wuxuu leeyahay ganacsi furan oo ah 1 badan EURUSD oo leh wadarta guud ee luminta $ 700, taas macnaheedu waa ▶ Lacagta + Faa'idada faa'iido / lumis = $ 1,000 - $ 700 = $ 300
Xaaladdan, gunnada waxaa si toos ah looga saari doonaa oo waxay ka tarjumaysaa koontada sida soo socota:
$ 1,000 $ 300 $0 Ma jiro Margin bilaash ah
Macaamiisha hadda iyo kuwa mustaqbalka inta lagu jiro wakhtiga mudnaanshaha, Macmiilku wuxuu heli doonaa lacag ah $ 1.0 lacag badan oo laga jarayo koontada keydka.
- Sababtoo ah xaalado suuq ah oo isdaba joog ah oo laga yaabo inay sii socoto, waxaa laga yaabaa inaanay marwalba suurtagal ahayn in laga saaro Lacagta (credit) ee 30%.
- Heerarka caadiga ah ee marinka caadiga ah ayaa weli soconaya mar kasta oo aan la eegin haddii deyntu wali tahay xisaabta macaamiisha ama haddii kale.
FXCC qasab kuma ahan wicitaan kasta ama khasaaro uu macmiilku dhibsan karo, oo ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidneyn khasaaraha sababtoo ah Heerka Joojinta, haddii abaalmarinta la jebiyo sabab kasta oo ku xiran shuruudaha iyo shuruudaha lagu tilmaamay.
FXCC waxay xaq u leedahay, iyada oo ujeedadeedu tahay, in la mamnuuco qof kasta oo jebiya Shuruudaha Dalabyada iyo / ama mid ka mid ah Shuruudaha iyo Qawaaniinta FXCC.
Calaamad kasta oo lagu maareeyo ama noocyada kale ee waxqabad khiyaano leh ama khiyaano leh ee xisaab kasta oo macaamil ganacsi ama wixii kale ee la xidhiidha ama ku xiran Lacagta Lacagta Lacagta (Bonus Credit) waxay tirtiri doontaa dhamaanba Macaashka Macaamiisha.
Dhibaatooyinka, sharaxaad ka bixinta Shuruudaha Xaaladaha iyo Shuruudaha Xaaladaha ama xaaladuhu soo baxaan oo aan daboolin shuruudaha iyo Shuruudaha Dalabaadka, khilaafaadka noocan oo kale ah ama falanqaynta si qalad ah ayaa lagu xallin doonaa FXCC habka ay u aragto inuu yahay midka ugu wanaagsan ee dhammaan dadka khuseysa. Go'aankaasi wuxuu noqon doonaa kama dambeys iyo / ama ku xiran dhamaan dadka soo galaya. Ma jiraan waraaqo la geyn doono.
FXCC waxay xaq u leedahay, maaddaama ay ku saleysan tahay xaddidaadda ku habboon, wax ka bedelayso, isbeddelka, joojinta, joojinta ama joojinta Dalabka, ama dhinac kasta ee Dalbashada, wakhti kasta adigoo ku siinaya ogaysiiska boostada gudaha iyada oo loo marayo Nidaamka Ganacsi ee Shabakadda Internetka, ama email ama adigoo ogeysiin ku samaynaya boggayaga. Waxaan ku dadaaleynaa inaan ku siinno ugu yaraan saddex (3) Ogaysiiska Maalmaha Ganacsiga ee wax ka beddelidda noocan oo kale ah haddii aysan ahayn wax aan haboonayn oo aan sidaas samayn karno.
Macmiilka waa in loola dhaqmaa sida aqbalaadda isbeddelka mooyaane Macmiilku wuxuu ku wargelinayaa Shirkadda in Macaamiishu aysan aqbalin isbedelada iyo rabitaanka joojinta dalabka. Macmiilku uma baahna inuu bixiyo kharash kasta oo ka dhalan kara joojinta kiiskan, marka laga reebo kharashka la bixinayo iyo bixinta Adeegyada la bixiyo illaa iyo waqtigaas.
Iyada oo aan jirin xaalado waa in FXCC ay mas'uul ka noqotaa cawaaqibta wax ka bedelida, isbeddelka, joojinta, joojinta ama joojinta hordhaca.
Copyright © 2019 FXCC. Dhamaan xuquuqda la keydiyay.